ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसेकी प्रियंका रंगे-हात समातिएपछि… – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /हलिवूड/बलिवूड/ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसेकी प्रियंका रंगे-हात समातिएपछि…
ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसेकी प्रियंका रंगे-हात समातिएपछि…
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले आफ्नो संस्मरण ‘अनफिनिश्ड’का कारण चर्चामा छिन् । यो किताब ९ जनवरीमा बजारमा आएको छ । किताबमा उनले आफू किशोर अवस्थामा हुँदाका एक जना ब्वाइफ्रेण्डको बारेमा पनि चर्चा गरेकी छिन् ।
प्रियंका एकपटक आफ्ना ती ब्वाइफ्रेण्डसँग कोठामा बसिरहेका बेला रंगे-हात समातिएकी थिइन् । पढाइका लागि अमेरिका गएका बेला प्रियंकाकी आन्टीले उनलाई ब्वाइफ्रेण्डसँग रंगे-हात समातेकी थिइन् ।दिउँसोको २ बजेको थियो र आन्टी घर फर्किने समय भएको थिएन । बबलाई घरबाहिर पठाउने कुनै बाटो नपाएपछि प्रियंकाले बबलाई कोठाको दराजभित्र बन्द
प्रियंकाका अनुसार अमेरिकामा बसेर पढ्ने क्रममा उनको एक किशोरसँग प्रेम भएको थियो । किताबमा प्रियंकाले ती किशोरको नाम बब भनेकी छिन् । त्यतिबेला प्रियंका १० कक्षामा पढ्थिन् । उनी अमेरिकामा आफ्नी किरण आन्टीसँग इण्डिया नापोलिसमा बस्थिन् । प्रियंकाका अनुसार उनी त्यतिबेला बबसँग बिहे गर्न चाहन्थिन् ।
प्रियंकाका अनुसार त्यस दिन उनी र बब एक अर्काको हात समातेर टिभी हेरिरहेका थिए । त्यही बेला प्रियंकाले आन्टी घरतर्फ आइरहेको झ्यालबाट देखिन् ।उनका अनुसार उनी निकै डराएकी थिइन् । त्यतिबेला दिउँसोको २ बजेको थियो र आन्टी घर फर्किने समय भएको थिएन । बबलाई घरबाहिर पठाउने कुनै बाटो नपाएपछि प्रियंकाले बबलाई कोठाको दराजभित्र बन्द गरिदिइन् ।प्रियंकाका अनुसार आन्टीले त्यसपछि प्रियंकाकी आमालाई भारत फोन गरेर यसबारे बताएकी थिइन् । त्यसपछि प्रियंका भारत फर्किन्
प्रियंकाले लेखेकी छिन् ‘किरण मासी घरभित्र पस्नुभयो र सबै कोठा चेक गर्न थाल्नुभयो । म बेडमा बसेकी थिएँ र मेरो हातमा बायोलोजीको किताब थियो । मैले आफूलाई पढिरहेको जस्तो देखाइरहेकी थिएँ । मासी मेरो कोठाको ढोकामा आउनुभयो र भन्नुभयो यसलाई खोल । मैले सोधें के खोल्ने ? आन्टीले भन्नुभयो आफ्नो दराज खोल ।म डरले काँपिरहेकी थिएँ किनकि यसअघि मैले मासीलाई यति रिसाएको कहिल्यै देखेकी थिइन् । मैले दराज खोल्नासाथ सब गडबड भयो किनकि त्यहाँ बब थियो ।’
प्रियंकाका अनुसार आन्टीले त्यसपछि प्रियंकाकी आमालाई भारत फोन गरेर यसबारे बताएकी थिइन् । त्यसपछि प्रियंका भारत फर्किन् । भारत फर्केपछि मिस इण्डियामा भाग लिएकी थिइन् । उनले यो प्रतियोगिता जितेर मिस वर्ल्डमा पुगिन र मिस वर्ल्डको उपाधि पनि जितिन् । त्यसपछि उनी चर्चामा आइन् । यहीँबाट उनको सफल फिल्म करिअरको सुरुवात भयो ।
अंकिताको विवाहमा सुशान्तको परिवार किन आएनन् ? सुशान्तको परिवारले पहिलो पटक खोले मुख (भिडियो हेर्नुस्)
अभिनेता विक्की कौशलसँग बिहे गरेपछि किचनमा ब्यस्त छिन् अभिनेत्री कैटरिना कैफ
५८ लाख भारुको साडी लगाएर उर्वशी सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सबैको ध्यान तानिन् नायिका उर्वशीले